Ogaden News Agency (ONA) – Jabhada OLF Ayaa Ku Dhawaaqday Xabad Joojin.
Jabhada OLF Ayaa Ku Dhawaaqday Xabad Joojin.
Wareegto ay soo saareen Jabhada Xoraynta Oromada ee OLF ayaa waxaa lagu sheegay inay xabad joojin ku dhawaaqeen. Arintan oo lagu macneeyay is badalada siyaasadeed ee ka shacay guud ahaanba Itoobiya.
Wareegtadan oo soo baxday shalay ayaa waxaa lagu sheegay in OLF ay ku dhawaaq day xabad joojin wali ma jiraan wada hadal rasmi ah oo dhex maray gumaysiga Itoobiya iyo Jabhada OLF marka laga reebo sida ay idaacada VOA laanta afka axmaariga ay ka sheegeen jabhada Oromadu in raysal wasaaraha Itoobiya ay ku kulmeen caasimada wadanka Eritrea ee Asmara.
Jabhada OLF ayaa waxay u dagaalantaa xoraynta dadka Oromiya ayagoo u jeedkooda ugu wayn uu yahay inay dalka ka xoreeyaan gumaysiga Itoobiya. Shacabka Oromada iyo Soomaalida Ogaadeniya ayaa waxay taariikh ahaan ka simanyihiin gumaystayaashii Abysinia oo gumaystay labadoodaba mudo badana kusoo wada jiray dulmi iyo gumaysi lagu hayay.
Jabhada OLF iyo ONLF ayaa waxaa ka dhexeeya heshiisyo siyaasadeed waxay sidoo kale ay ku bahoobeen dalada PAFD oo ay ku bahoobeen ururo dhamaantood kasoo wada horjeeda gumaysiga Itoobiya isla markaana beegsanaya inay gaadhaan hadafkooda xoriyadeed.